Xaafadda Rinkeby oo shir deg deg ah ka dhacay ka dib dilkii loo geeystay wiil soomaali ah | Somaliska
Xaafadda Rinkeby ee magaalada Stockholm ayaa waxaa siyaasiinta, booliska iyo waalidiinta xaafadaas iskugu yimaadeen shir deg deg ah oo loogaga arrinsanayo xaaladda ammaan ka dib markii xalay lugu dhex dilay wiil soomaali goob laga cunteeyo oo ku taala Rinkeby.
“Waa shooksanahay, waxaan ka fekaraya sida ay uga sii dareeyso xaalada waxna aan looga qabaneeyn” ayey tiri Safiyo Xuseen oo ka tirsan gudiga waalidiinta ee xaafadda Rinkeby oo iskugu yeertay qeybaha kala duwan ee xaafadda kulankaasi deg dega ah.
Dilka haata dhacay xaafadda Rinkeby ayaa waxaa uu noqonayaa kii labaad ee muddo tobban cisho gudahood ka dhaca, mana jirto cid ilaa haatan loo soo qabtay-.
“Waa xaalad halis ah, waxaana muhiim inoo ah siddii aan xariga ugu jari laheyn dembiyadaan. Sababtaas awwgeedna waxaan heeysano (dhaqaale) aan gelin doonaa ka hortaga dilka ah iyo falal dambiyeedka” ayuu yiri Ulf Johansson oo ah madax deegaamedka booliska Stockholm, oo intaas hadalkiisa ku daray falalkaan marka laga reebo dhacdadii xalay ay yihiin falal aargoosi ah oo u dhaxeeyo kooxo kariminaalo ah.
Maxamed Xaaji, aabe soomaliyeed oo ka walaacsan dilalka isa soo taraya.
Maxamed Xaaji Faarah, waa dhaq dhaaqe ka tirsan isbaheeysiga waalidiinta ee degmadda Järva, wuxuu sheegay inuu ka walaacsan yahay falalkan dilalka ah ee isa soo tarayo.”Waxeey ku guuleeysteen fariintooda ineey soo gudbiyaan, haddeey rabeen waxeey ku dhex dagaalami kareen keymaha dhexdooda, balse waxeey doorteen in dadka hortooda ay falalkooda ku fuliyaan. Taasina wa digniin naloo soo diray dhamaanteen. Aniga ma ahi qof aqbali kara, kolka aan cabsano yar iyo waayeel, waxaa halkeedii ka sii soconaya aamusnaanta” ayuu yiri aabahan soomaaliyeed oo ka walaacsan falalka amaan xummo ee xafadda ku soo laa laabtay.
Ugu dambeyntiina magaaladda Stockholm gaar ahaan xaafadda Rinkeby oo ay soomaalida ku badan tahay ayaa waxaa xalay fiidkii lugu tuugtay wiil soomaali ah oo 25 ah, kaas oo markii dambe ku geeriyooda isbitaalka. Waxaa falka wiilkan lugu dilay qeyb ka yahay falalka ammaan ee xaafadaas la daala dhaceeysay mudooyinkii ugu dambeeyey. Iyadoo qaarkood falalkan xitaa la sheegay inuu u dhaxeeyo dhalinyarro soomaali ah.